Baarlamaanka oo khudbad ka dhageysanaya Musharaxiinta Guddoonka Baarlamaanka – WARSOOR
Baarlamaanka oo khudbad ka dhageysanaya Musharaxiinta Guddoonka Baarlamaanka
Muqdisho- (warsoor) – Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dhageysanaya musharaxiinta u tartamaya xilalka ka duwan ee guddoonka baarlamaanka Soomaaliya.
Ilaa 22-Musharax ayaa u taagan saddaxda xi lee guddoonka baarlamaanka sida ay shaaciyeen Guddiga qaban qaabada doorashada gudddoonka baarlamaanka ee Soomaaliya.
Afar Musharax ayaa u tartameysa Xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya, waxaana sidoo kale Ku Xigeenka Koowaad u tartamaya Lix Musharax, halka Guddoomiye Ku Xigeenka labaad ay u tartamayaan 12-Musharax.
Musharaxiinta Guddoonka Baarlamaanka waxaa ka mid ah Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka iyo labadiisii ku xigeen kuwaasi oo doonaya inay markale ku soo laabtaan kuraasta.
11-ka iyo 12-ka Bishaan ayaa waxaa lagu wadaa inay dhacdo Doorashada guddoonka baarlamaanka ee Soomaaliya.
Ciidamada Xeebaha Galmudug oo qabtay Doon laga leeyahay Dalka Yemen